मातृका यादव भन्छन् – गडबड गर्नेलाई छाड्दिन, त्यस्ता कर्मचारीका लागि म खतरा हुँ ! भिडियो सहित – Setosurya
नवनियुक्त उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आफ्नो कार्यकालमा कुनै पनि कर्मचारीले काममा ढिलासुस्ती र अनियमितता गर्न सह्य नहुने बताएका छन् । काममा गडबड गर्नेका लागि आफू खतरानाक व्यक्ति भएको मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
सोमबार उद्योग मन्त्रालयमा पदभार ग्रहणपछि कर्मचारीहरुलाई मन्त्री यादवले मित्रवत भएर काम गर्न निर्देशन दिए । आफूप्रति आउने प्रतिक्रिया जस्तासुकै भए पनि दुस्साहस र अन्यायसँग सम्झौता नगर्ने मन्त्री यादवको भनाइ थियो ।
‘मलाई मन्त्री भन्दा पनि मित्र सम्झेर सहयोग गरिदिनु होला । म गडबड गर्नेका लागि मात्रै खतरा हुँ,’ मन्त्री यादवले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयमार्फत हामीले जनतालाई धेरै सहयोग गर्न सक्छौं ।’
पर्यटनमन्त्री रबिन्द्र अधिकारीमाथि सांसद खगराज अधिकारीले औला उठाएपछि…
नेपालबारे अनावश्यक चासो नराख्न भारतलाई चिनको चेतावनी
नवराज सिलवाल पक्रन देशभरका प्रहरी कार्यालयमा पत्र
देश रोइरहेको बेला पर्वतका सांसद जोशी भने नाचगानमा रमाउंदै
सप्तरी घटना (अपडेट): मर्नेको संख्या ५ पुग्यो, दर्जन घाइते
नेपालकाे चुनाव, जित चीनकाे?
नयाँ मतदाता परिचय पत्र कहिले र कसरी पाउने ?